‘पुलिसको हाकिम हुँ’ भन्दै श्रीमान् कै अगाडि श्रीमतीलाई जि’स्क्याउने प्रहरीलाई राम धुलाई गरेपछि…. – Sanchar Patrika
‘पुलिसको हाकिम हुँ’ भन्दै श्रीमान् कै अगाडि श्रीमतीलाई जि’स्क्याउने प्रहरीलाई राम धुलाई गरेपछि….
July 11, 2020 214
काठमाडौं। श्रीमानकै अगाडी उनकै श्रीमतीलाई जि’स्क्या’उने प्रहरीलाई स्थानियले राम धु’लाई गरेका छन् । प्रहरीको धा’क देखाउँदै स्कुटरमा जाँदै गरेका श्रीमान श्रीमतीलाई प्रहरीले दु:ख दिएका थिए । श्रीमानकै अगाडी श्रीमतीलाई नराम्रो व्यवहार गर्न लागेपछि स्थानियले राम धु’लाई गरेका हुन्। यो घ’टना भारतको हो । भारतको पाली जिल्लामा रहेको जेतरणाको रास थाना नजिक ड्युटिमा रहेका प्रहरी पन्नालाल चौधरीले अर्काको श्रीमतीलाई जि’स्क्या’एका थिए ।
सो चौकीका प्रमुख रहेका उनलाई महिलालाई नराम्रो व्यवहार गरेको देखेपछि स्थानियले राम धु’लाई गरेका हुन्। स्थानियले ति प्रहरीका विरुद्ध माथिल्लो निकायमा उ’जुरी पनि गरेका छन् । उनी स्कुटरमा कतै जाँदै थिए । वाटोमा एक जना महिला आफ्ना श्रीमानसंगै उभिएकी थिइन् । ति प्रहरीले स्कुटरवाट ओर्लिएर महिलालाई जि’स्क्या’उन लागे । उनले नप’च्ने खालका इशारा पनि गरे।
महिलालाई नराम्रो इशारा गर्दै बोलाएको देखेपछि स्थानियले ति प्रहरीको पि टा ई गरे । उनी भा ग्ने कोशिष गरे तर महिलाहरुले उनलाई घे रे र राम धुलाई गरे अनि प्रहरीलाई बुझाइदिए । प्रहरीले अहिले सो घ’टनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महिलाहरुले भिडियो पनि बनाएर सार्वजनिक गरिदिए । त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको केही दिन सम्म पनि प्रहरीले कारवाहीको संकेत नदेखाएपछि महिलाहरु वि’रोधमा उ त्रि ए । उनीहरुले माथिल्लो निकायमा उ’जुरी गरेका छन्।
Prevभारतीय च्यानल बन्द भएपछि अ’श्लिल शब्द प्रयोग गर्दै चितवनका डाक्टरले दिए आ’पत्ति’जनक अभिव्यक्ति दिएपछि…
Nextसर्प बिज्ञले यसरि पक्रनु पर्छ सर्प भनेर सिकाउँन खोज्दा करेट सर्पले टोकेपछि (भिडीयो)